Senatar Xuseen oo Golaha Shacabka ka hor sheegay caqabada ugu weyn ee hortaaggan Dastuurka – Kalfadhi
Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ah Xoghayaha Guddiga Dastuurka Baarlamaanka oo ka hadlayay Golaha Shacabka, ayaa sheegay in dhammaan Xukuumadda, Baarlamaanka iyo dowlad-gobolleedyada aysan daneyneynin Dastuurka.
Mudane Xuseen, ayaa aaminsan in aysan jirin cid rabta Dastuurka oo sida Doorshada ugu dagaallameysan.
“Caqabada koowaad ee Dastuurka heysata waxaa ay tahay, cid rabta oo sida doorashada ugu dagaallameysa oo gacanta heysa oo kor u qaada malahan. Xukuumadda, Baarlamaanka iyo dowlad-gobolleedyada dhammaan cid daneyneysa ma jirto”.
Dastuurka waxaa uu hormuud ka yahay khilaafaadka siyaasadeed maxaa yeelay isagaa is khilaafaya, ayuu raaciyay hadalkiisa.
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, ayaa todobaadkii hore ka dooday akhrinta 3-aad ee Hindise-Sharciyeedka Qareennada Soomaaliyeed iyo akhrinta Warbixinta Guddiga Dastuurka BFS.
Xisbiyada siyaasada iyo siyaasiyiinta ayaa dhammaan dowladda ku eedeynaya in ay ka gaabisay dhammeystirka Dastuurka, waxaana ay ku micneyeen in Dastuurka uu noqday mashruuc.
Mee Shirka Dhuusa Marreeb?